Kwezinye yezifo ukuhlinzwa emgogodleni kuwukuphela kwendlela. Eside yokwelapha ingase nemiphumela. Izimila izingxenye ezihlukahlukene yomgogodla, waphuka zidinga ngokushesha kokungenela kuhlinzwa. imisebenzi enjalo zihlale esibuhlungu kakhulu, ngoba nakanjani a yokusebenza insimu enkulu kakhulu okuyinto usike eziningi ophilayo izicubu edalula ingxenye emgogodleni. ukusondela kuyingozi kakhulu emsipheni izindlela, ikhono ukungena ukutheleleka ezijulile. Isikhathi nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa ngokuvamile kubuhlungu, kudinga yokutakula eside.
ukuhlinzwa endoscopic umgogodla
Eminyakeni yamuva, abantu abangaphezu futhi zisabalele ukuhlinzwa endoscopic ku yomgogodla. Bona ukunciphisa ukuhlukumezeka kuhlinzwa, unciphise isikhathi ekululameni. Lapho kokungenela endoscopic yenza imbobo encane ukuveza ekhethekile yokusebenza ithuluzi kokuba fiber-optical. Ngosizo lwawo qapha isithombe ngengxenye ngocansi, okuyinto ngaphansi kokungenela kuhlinzwa. Kodwa nganoma iyiphi indlela noma waba madolonzima ukuhlinza, kufanele kube ukuhlela isikhathi nokuvuselelwa. Ukuze isiguli ngasinye, kufanele kube khona uhlelo kuyasiza ongaqeda imiphumela lokuhlinzwa, uphinde ukwazi ukuhamba kanye ukubuyisela motor umsebenzi.
Ukuthi baziphathe kanjani ngesikhathi nokuvuselelwa
Ezinye isikhathi kuyodingeka abanamathela embhedeni ukuphumula. isikhathi esingakanani incike kobukhulu imisebenzi, emgogodleni kanjani esinqunyiwe. Ngemva izinqubo microsurgical isiguli singase uvuke ezinsukwini 2-3. Uma yomgogodla igibele grafts ukuze usinde isikhathi ezidingekile ukuphulukisa yabo. Fusion yabo ephelele kuzokwenzeka ngaphambili kuka izinyanga 3. Ngokuvamile ngaphakathi 3 izinsuku ngemuva kokuhlinzwa emgogodleni radiographs ezenziwe control ukuvumela udokotela ukunquma isikhathi embhedeni ukuphumula. Isiguli ungathola embhedeni, eyenziwa massage yezokwelapha futhi Physiotherapy.
Ngokuvamile emva kokuhlinzwa umgogodla idinga corset. Ukugqoka ngokuvamile kudinga izinyanga eziningana. Phakathi nalesi sikhathi, kukhona imisipha yoma futhi yisigaba esibaluleke kakhulu esikhathini nokuvuselelwa kuyinto umsebenzi zokwelapha lihambisana esitho massage. Kutholwa iziguli kufanele ugweme emithambekeni kungavunyelwe umsebenzi ngokomzimba, awukwazi phakamisa izinsimbi. Ukuhlala isikhathi eside ayivunyelwe. Kuphela ngenyanga ngemva kokuhlinzwa kungaba isikhashana ukuba ahlale, ukuncika emuva. Thola kusukela isihlalo ungabi eguqa yomgogodla ngezandla zakhe ngamadolo akhe noma izingalo kwesitulo.
Kwezinye izimo, ungase uqale ukusebenza emuva lé ngawo ngemva kwamasonto ayisithupha ukuhlinzwa emuva wawenziwa. Ukwelashwa Kufanele ziqhubeke ekhaya noma esigulini esingalalisiwe esibhedlela ngesimo elashwe ngokomzimba futhi massage. Ngezinye izikhathi sonke isikhathi umuntu ophoqelelwe ukugqoka corset ekhethekile. Kufanele ikakhulukazi Qaphela lapho ukuya umsebenzi zomphakathi futhi Gwema okungazelelwe ukunyakaza futhi Nyakazisa.
Kungani imfiva kungekho zimpawu e ingane
Uyazi kanjani ukuthi zingaki amaphuzu athi "Siyabonga" avela ku-Sberbank wena owakwe?
Lapho ukutshala nozonakekela Honeysuckle?